Izindaba - Indwangu engalukiwe ngaphandle kokuluka
Ngokubuka komphakathi, izindwangu zendabuko zilukiwe. Igama lendwangu engalukiwe liyadida, ingabe liyadinga ukwelukwa ngempela?
Izindwangu ezingalukiwe zibizwa nangokuthi izindwangu ezingalukiwe, okuyizindwangu ezingadingi ukwelukwa noma ukwelukwa. Akwenziwa ngokwesiko ngokuluka ngentambo nangokuluka ngamunye ngamunye, kepha indwangu eyakhiwe ngokuhlanganisa imicu ndawonye ngezindlela zomzimba. Ngokuya ngenqubo yokukhiqiza, izindwangu ezingalukiwe zisebenzisa ngqo ama-polymer chips, imicu emifushane noma imicu yokwakha imicu ngokuhamba komoya noma ngenetha lokukhanda, bese iqinisa ngokuphotha, ngokushaya ngenaliti noma ngokugingqa okushisayo, bese ekugcineni yakha indwangu engalukwanga ngemuva kokuqeda Kwendwangu.
Inqubo yokukhiqizwa kwezindwangu ezingalukiwe zingahlukaniswa ngezinyathelo ezilandelayo:
1. Ukuhlanganisa i-fiber; 2. I-Fiber ibe yinetha; 3. Ukulungiswa kwenetha le-fiber; 4. Yenza ukwelashwa kokushisa; 5. Ekugcineni, ukuqeda nokucubungula.
Ngokuya ngezimbangela zezindwangu ezingalukiwe, ingahlukaniswa njenge:
Spunlace izindwangu ezingezona ezelukiwe: Ama-jets amanzi acindezelwa kakhulu afuthwa kolunye noma ngaphezulu kwezingqimba ze-fiber webs ukubopha izintambo komunye nomunye, ngaleyo ndlela kuqiniswe ama-fiber webs.
Indwangu ebopha ukushisa engeyona eyelukiwe: ifaka okokuqinisa ukuqinisa okune-fibrous noma i-powdery yokuncibilikisa i-fiber web, ukuze i-fiber web ifudunyezwe futhi incibilike bese ipholile ukuyiqinisa ibe yindwangu.
I-Pulp indwangu yomoya engenziwanga ephothiwe: eyaziwa nangokuthi iphepha elingenazintuli, indwangu yokwenza iphepha eyomile engeyona eyelukiweyo. Isebenzisa ubuchwepheshe obubekwe emoyeni ukuguqula imicu ye-pulp yokhuni ibe yimicu eyodwa, futhi imicu ebeka umoya isetshenziselwa ukuhlanganisa imicu esekhethini lewebhu bese iqiniswa ibe yindwangu.
Indwangu emanzi engalukiwe emanzi: Izinto zokwenziwa kwefayibha ezifakwe enkabeni yamanzi zivulwa zibe yimicu eyodwa, futhi izinto ezihlukile zefayibha zixutshwe ukwakha i-fiber ukumiswa slurry, okuhanjiswa kuyindlela yokwakha iwebhu, futhi iwebhu kuhlanganiswe kwaba yindwangu esimweni esimanzi.
Indwangu ye-Spunbond engalukiwe: Ngemuva kokuthi i-polymer ikhishwe futhi yelulwe ukuze yenze imicu eqhubekayo, ibekwa enetheni, futhi inetha le-fiber lihlanganiswe noma liqiniswe ngemishini ukuze libe yindwangu engalukwanga.
Indwangu ye-Meltblown non-woven: Izinyathelo zokukhiqiza ziyi-polymer input-melt extrusion-fiber formation-fiber cooling-net form-reinforcing into cloth.
Indwangu yenaliti engafakwanga ngenaliti: Luhlobo lwendwangu eyomile engalukiwe eyomile, esebenzisa umphumela wokubhoboza wezinaliti ukuqinisa i-web fluffy ibe yindwangu.
Indwangu ehlanganisiwe engalukiwe: Luhlobo lwendwangu eyomile engalukiwe eyomile, esebenzisa isakhiwo se-warp-knitted loop ukuqinisa i-fiber web, ungqimba wentambo, izinto ezingalukiwe (njengephepha lepulasitiki, njll.) Noma inhlanganisela yazo ukwenza indwangu engalukanga.
Izinto zokwenziwa kwe-fiber ezidingekayo ukwenza izindwangu ezingalukiwe zibanzi kakhulu, njengekotini, i-hemp, i-wool, i-asbestos, i-fiber fiber, i-viscose fiber (i-rayon) kanye ne-fiber yokwenziwa (kufaka phakathi i-nylon, i-polyester, i-acrylic, i-polyvinyl chloride, i-vinylon) Linda ). Kodwa kulezi zinsuku, izindwangu ezingalukiwe azisenziwa kakhulu ngezintambo zikakotini, kanti eminye imicu efana ne-rayon ithathe indawo yayo.
Indwangu engalukiwe ibuye ibe uhlobo olusha lwezinto ezinobungani bemvelo, olunezimpawu zobufakazi bomswakama, obuphefumula kalula, obulula, obulula, obungashisi, obulula ukubola, obungeyona into enobuthi futhi obungacasuli, ocebile ngombala, Intengo ephansi, evuselelekayo, njll., ngakho-ke inkambu yohlelo lokusebenza ibanzi kakhulu.
Phakathi kwezinto zokwenziwa ezimbonini, izindwangu ezingalukiwe zinezici zokusebenza kahle kokuhlunga, ukwahlukanisa, ukufudumeza ukushisa, ukumelana ne-asidi, ukumelana kwe-alikhali, kanye nokumelana nezinyembezi. Asetshenziswa kakhulu ukwenza imidiya yokuhlunga, ukwahlukanisa umsindo, ukufakwa kukagesi, ukupakisha, ukufulela nezinto zokwakha, njll. Umkhiqizo. Emkhakheni wezidingo zansuku zonke, ungasetshenziswa njengezinto zokufaka ulwelwesi, amakhethini, izinto zokuhlobisa udonga, amanabukeni, izikhwama zokuhamba, njll. Emikhiqizweni yezokwelapha neyezempilo, ingasetshenziswa ekukhiqizeni imijiva yokuhlinza, imijiva yesineke, imaski, amabhande enhlanzeko, njll.